Triderm (ထရိုင်ဒမ်) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Triderm (ထရိုင်ဒမ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Triderm® Creamကိုအရေပြားအခြေအနေအမျိုးမျိုး (နှင်းခူ၊ အရေပြားရောင်ရမ်းနာ၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ အကွက်ထခြင်း) များအတွက်သာအများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ Triamcinolone သည် အဆိုပါအခြေအနေများတွင်ဖြစ်တတ်သည့် ရောင်ခြင်း၊ ယားခြင်းနှင့် နီခြင်းများကိုလျော့ချပေးနိုင်၏။
ဤဆေးမှာအလတ်စားမှအပြင်းစား corticosteroid တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Potency သည် သင်သုံးသည့်ဆေး ပြင်းအား၊ ပုံစံတို့အပေါ်မူတည်ပါသည်။ Potency အသေးစိတ်ကိုသိလိုပါက ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုမေးပါ။
Triderm (ထရိုင်ဒမ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးကိုအရေပြားတွင်သာလိမ်းပါ။ မျက်နှာ၊ ပေါင်ခြံ၊ ချိုင်းတို့တွင် ဆရာဝန်မှမညွှန်ဘဲ မလိမ်းရ။
လက်ကိုဆေးပါ။ ဆေးမလိမ်းခင် ဖြစ်သည့်နေရာကိုသန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပါ။ ဆေးပါးပါးလေးကိုညင်ညင်သာသာလေးလိမ်းပါ။ များသောအားဖြင့် တစ်ရက်လျှင် ၂-၄ ကြိမ် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်းလိမ်းပါ။ ဆရာဝန်မှ မညွှန်ကြားလျှင် ဆေးလိမ်းပြီးနောက် ဖြစ်သည့်နေရာကိုဖုံးထားခြင်း၊ ပတ်တီးစီးခြင်း၊ ကြပ်စည်းခြင်းများမလုပ်ရ။ ကလေးများတွင် Diaper နေရာများ၌သုံးမည်ဆိုပါက Diaper အကြပ်များနှင့် ပလက်စတစ်ဘောင်းဘီများကိုမသုံးပါနှင့်။
ဆေးလိမ်းပြီးနောက်လက်ကိုလိမ်းရသည်မျိုးမဟုတ်ပါကလက်ဆေးပါ။ ဆေးကို မျက်လုံးတစ်ဝိုက် လိမ်းမည်ဆိုပါက မျက်လုံးထဲမဝင်အောင် သတိထားပါ။ မဟုတ်လျှင် ရေတိမ်စွဲခြင်း၊ ရေတိမ်ပိုဆိုးသွားခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို့အတူ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်တို့တွင် ဆေးမဝင်အောင် ဂရုပြုရမည်။ မျက်လုံး၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်အတွင်းသို့ ဆေးဝင်သွားပါက ရေများများနှင့်ဆေးပါ။
ဆေးကိုညွှန်ထားသည့်အခြေအနေများတွင်သာအသုံးပြုပါ။ သတ်မှတ်ထားသောကာလထက် ပိုကြာအောင်သုံးခြင်းမျိုးမလုပ်ရ။ အခြေအနေတိုးတက်မလာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးသွားလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
Triderm (ထရိုင်ဒမ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Triderm® Creamကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Triderm® Creamကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Triderm® Creamဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းခြင်းကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။
Triderm® Creamအားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Triderm (ထရိုင်ဒမ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Triderm®တွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
ဆေးလိမ်းရမည့်နေရာတွင် ပိုးဝင်ခြင်းသို့မဟုတ် အနာများရှိနေပါကမလိမ်းရ။
ရှားပါစွာဖြင့် Corticosteroid များကို ကြာရှည်သုံးခြင်း၊ အရေပြားဧရိယာအတော်များများတွင်လိမ်းခြင်းတို့က ခန္ဓါကိုယ်မှ ဖိစီးမှုအားတုံ့ပြန်သည့်အပေါ်တွင် ခက်ခဲသွားစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခွဲစိတ်မှု သို့မဟုတ် အရေးပေါ်ကုသမှုမလုပ်ခင် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သည့်ဖျားနာမှု၊ ဒဏ်ရာဖြစ်မှုတို့ ဖြစ်လာလျှင် ဆရာဝန်ကို ဤဆေးသုံးနေကြောင်းသို့ ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းကဆေးကိုသုံးခဲ့ကြောင်းပြောရပါမည်။
ဖြစ်လေ့မရှိသော်လည်းဆေးကိုအကြာကြီးသုံးလျှင် ကလေး၏ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ကလေးအရပ်အမြင့်ကိုစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့်မှန်မှန်ပြပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တွင် ဆေးကိုအမှန်တကယ် လိုအပ်မှသာသုံးရမည်။ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများအတွက် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အရေပြားပေါ်လိမ်းလျှင် ဆေးသည်နို့ရည်ထဲသို့ ဖြတ်နိုင်မဖြတ်နိုင်မသိရသေးပါ။ သောက်ဆေးဆိုလျှင်တော့ သူနှင့်အုပ်စုတူဆေးများက နို့ရည်ထဲသို့ဖြတ်နိုင်ပါသည်။ နို့တိုက်ကျွေးမှုမစခင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Triderm (ထရိုင်ဒမ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသုံးစွဲမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Triderm (ထရိုင်ဒမ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးကိုအရေပြားတွင် ပထမဆုံးစလိမ်းဖူးခြင်းဆိုပါကပူခြင်း၊ ယားခြင်း၊ စပ်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ခန္ဓါကိုယ်မှဆေးကိုတုံ့ပြန်သည့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်းသက်သာသွားပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသက်သာမသွားဘဲပိုဆိုးလာပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
ဖြစ်လေ့မရှိသော်လည်းပြင်းထန်သည့်လက္ခဏာများဖြစ်သောကုတ်ရာခြင်း၊ အရေပြားပါးခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ ဝက်ခြံထွက်ခြင်း၊ ဆံပင်ပေါက် များလာခြင်း၊ ဆံပင်နှင့်အရေပြားဖုလေးများဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
ဤဆေးကိုသုံးသည့်အခါ အရေပြားပိုးဝင်ခြင်းပိုဆိုးလာနိုင်ပါသည်။ နီခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ စပ်ခြင်းများသက်သာမလာလျှင် ဆရာဝန်ကိုအသိပေးပါ။ ရှားပါးစွာနှင့် ဆေးကိုအရေပြားမှ စုပ်ယူသွားနိုင်၏။ ၎င်းက Corticosteroid များခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်လာစေနိုင်ပါသည်။ ကလေးများနှင့် ဆေးကိုအကြာကြီးသုံးသူ၊ အရေပြားဧရိယာအများအပြားတွင်သုံးသူတို့၌ အဖြစ်များပါသည်။ ပုံမှန်မဟုတ် မောပန်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခြေထောက် ခြေကျင်းဝတ်တွင်ဖောင်းကြွခြင်း၊ ရေဆာခြင်း၊ ဆီးခဏခဏသွားခြင်း၊ အမြင်အာရုံပြဿနာဖြစ်ခြင်းစသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Triderm (ထရိုင်ဒမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Triderm® Creamသည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Triderm (ထရိုင်ဒမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Triderm® Cream က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Triderm (ထရိုင်ဒမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Triderm® Creamသည် လက်ရှိသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Triderm (ထရိုင်ဒမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေအတွက် Triderm (ထရိုင်ဒမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Triderm (ထရိုင်ဒမ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Triderm® Creamကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Triderm® Creamကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
Triderm® Cream. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-5228/triderm-topical/details#overdose. Accessed November 15, 2017
Triderm® Cream. https://www.drugs.com/drug-interactions/triamcinolone-topical,triderm.html. Accessed November 15, 2017